Maddi waldhabdee Minjaarii fi Karrayyu maali? - BBC News Afaan Oromoo
Maddi waldhabdee Minjaarii fi Karrayyu maali?
Qaamooleen bu'aa siyaasaatiif dhimmicha rakkoo daangaa fakkeessanii aanaalee ollaa Minjaarii fi Boosatii fi Karrayyuu walitti buusan mootummaan saffisaan tarkaanfii fudhachuu qaba jedhu maanguddoonni aanaalee Minjaar Shankooraa fi Boosat.
Maanguddoonni aanaalee lamaanii rakkoo uumame akkaataa furmaata ijibbaataa argaturratti Adaamaatti mari'achaa jiru.
Maanguddoonni BBC'n dubbise kunneen battala walitti buiinsi kun eegaletti gama mootummaatiin tarkaanfii ariifataa fudhachuu dhabuun rakkoon kuni akka bal'atu taasisuu dubbatan.
'‘Dabbasaan gaanfa dhiiraati'' Karrayyuu
Miidiyaaleen rakkoo uumame kana dhaadheessaa turanis rakkoo himuun alatti hojii manguddoonni garee lamaanii hojii nageenya buusuu hojjechaa jiran ummataan gahuu dhabuus komatan.
Tumsa hanga ammaatti taasisaniin karaa lamaanirraayyuu waraannii fi buqqaatiin dhaabbachuu himan.
Gochi kunis bu'uurarraa rakkoo daangaa akka hin taaneefi rakkoo paartilee siyaasaafi kirasassabdonni uumani jechuunis ka'umsa rakkichaa ibsu.
"Faayidaa dhuunfaatiifi sababa siyaasaatiin seenaa waliin jireenyaa fi obbolummaa saboonni lamaan qaban balleessuu hin qabnu," jedhu maanguddoonni.
Gama lamaanirraayyuu hoggansi naannummaa fi siyaasaan loogummaan jiru rakkinicha waan hammeessuuf hoggansi mootummaa gama lamaanii gocha akkanaarraa ofqusachu qabu jechuun waamicha dhiheessan manguddoonni garee lamaanii.
Hanga nageenyi waaraa dhufee kan buqqa'es qe'ee isaaniitti deebi'anitti, raayyaan ittisa biyyaa giddu galtummaa jalqabe itti fufuu qabas jedhan.
"Maanguddoonni hojii araaraa kanaaf aarsaa barbaachisu kanfallee ollaa lameen gidduutti obbolummaan ture akka itti fufu nigoona," Jedhan.
Jaarsummaa gartuu lamaanii Adaamaatti taahame kanarratti garuu gama Oromiyaatiin warri Fantaallee, gama naannoo Amaaraatiin ammoo warri aanaa Barahaat hin argamne.
Warri jaarsummaarraa hafe kunimmoo kanneen waldaangessan waan ta'eef hojiin araaraa kuni karaa guutuu ta'een akka milkii hin dhabneef yaaddoodha jedhu manguddoonni.
Kanaafis marii jaarsummaa itti aanurratti gartuun araararaa hafan lamaanuu argamanii rakkichi akka furamuufis kallattii kaahataniiru.
Manguddoota hojii araaraa kana hojjechaa jiran keessaa tokko kan tahan Obbo Maammoo Gadaa, warra Fantaallee jaarsummaa itti aanurratti daballee araara fiixaan baasna jedhu.
"Fantaallee jaarsummaa kanarratti hirmaachuu qaba ture, ammas taanaan bakka isaan hin jirretti murte tokkoyyuu hin dabarsinu. Jaarsummaa keenya itti aanu Kibxata dhufu aanaaleen afranuu bakka jiranitti beellamanneerra," jechuun BBC'tti himaniiru obbo Maammoon.
Gama naannoo Amaaraatiin jaarsummaa kanarratti kan hirmaatan Obbo Kinfee Mogosis hojiin jaarsummaa eegalle bu'aa gaarii akka fidu shakkii hin qabnu jedhu.
"Jaarsummaan kun hanga ammatti bu'aa argamsiisaa jira. Lolli dhaabbateera, buqqaatiinis akkasuma, walhubannaan argamere jira. beellama itti aanuun aanaalee Fantaallee fi Barahaat dabalannee ni mari'anna.
Kanaaf jaarsummaan rakkoo kana ni fura jedheetiin amana" jechuun abdii qaban ibsu Obbo Kinfeen.
Torbanoota darban keessa walitti bu'insi saboota lamaanii naannoo daangaatti raawwate dubbuu ijoo tahee tureera.
Viidiyoo Gunfura Karrayyuu: ''Dabbasaan gaanfa dhiiraati''